Marti Galiyaasha Koobka Aduunka Ee Russia Oo Si Xun U Xusuuqay Saudi Arabia Iyo Ceebta Boqortooyada Sucuudiga Ee Koobka Aduunka Oo Sii Socota. – Laacib.net
Waxaa la sugi doonaa natiijada kulanka Masar iyo Uruguay oo xiiso u yeeli doonta kulamada Group A iyada oo Russia saddexda dhibcood ka sii qaadatay Saudi Araba. Waxayna ciyaartu ku dhamaatay 5-0 ay marti galiyaasha koobka aduunka ee Russia ku dubteen Saudi Arabia.
Safafka Labada Dal Ee Russia Vs Saudi Arabia
axmed maxamed cabdulle uurdoox says:
14-06-2018 at 10:44 pm
Iid wanaagsan bahda laacib sucuudigu. Sidaa bay ku hareen waxaan sugnaaba waa russia masar iyo. Urugway 2 naadi ee ka soo bixi laheyd guruub a